Kiredhiti Kadhi Kugadziriswa uye Nhare Yekutarisa Yakatsanangurwa | Martech Zone
Chipiri, May 20, 2014 Muvhuro, June 29, 2015 Douglas Karr
Kubhadhara nharembozha kuri kuve kwakajairika uye zano rakasimba rekuvhara bhizinesi nekukurumidza uye kuita nzira dzekubhadhara kuve nyore kumutengi. Kunyangwe iwe uri ecommerce mupi ane yakazara yekutenga ngoro, a mutengesi ane mobile Checkout (muenzaniso wedu pano), kana kana mupi webasa (tinoshandisa FreshBooks yeinvoicing nemari inobhadharwa inogoneswa), nharembozha inzira huru yekuvhara gaka pakati pechisarudzo chekutenga nekutendeuka chaiko.
Patakatanga kusaina, takakatyamadzwa nekuoma kwazvaive zvakaita kumuka nekumhanya uye nekunzwisisa zvese zvefizi zvakabatana. Aive makore mashoma apfuura… ikozvino ese-mu-one mhinduro senge Bluepay ari kurerutsa maitiro uye mubhadharo unobatana nekugamuchira makadhi echikwereti. Vakapa nhungamiro kune vedu vaverengi pano.
Chero kambani inogamuchira makadhi echikwereti ine mukana wekudzora mari nekutenga kwakatenderedza kune vanopa kadhi rechikwereti uye masisitimu ekugadzirisa ekubhadhara. Kune akawanda akasiyana maitiro ekugadzirisa pamusika, imwe neimwe iine akasiyana maficha uye mutengo. Tarisa iyo inopa yakanyanya kuchengetedzeka, yakanyanya kurerukirwa, inodhura mitengo, uye zvakanyanya kukosha kushanda kwayo. Ma processor ekubhadhara anosiyana mukukosha kana zvasvika kune saizi yekuvhiya, huwandu hwekubhadhara iwe urikugadzirisa uye kugona kwako kuvaka zita rekuzivikanwa pakati pevanogona kuve vatengi. Kana ako marongero ekugadzirisa ekubhadhara ave panzvimbo, haufanire kunetseka - unogona kutarisa pane chako chigadzirwa uye hunyanzvi. Kristen Gramigna, CMO yeBluepay.
Nharembozha yekutora inoshanda nekushandisa nharembozha yemutengesi kuendesa ruzivo rwekadhi rechikwereti, bvumidza kadhi, uye tumira risiti Uchishandisa nhare yevatengesi account, kutengesa kwacho kunoendeswa nemagetsi kuimba yekuchenesa uye mutengesi anowana mari yake mumazuva maviri kana matatu chete. Ndiko kukura kukuru pane ingangoita makumi matatu-mazuva lag nguva inosanganisirwa neyemanyorero kadhi rechikwereti. Kunze-saiti vatengesi vanogona kuburitsa kudzoreredza zviri nyore, futi. Iko kubhadharisa kunowanzobva kukadhi remutengi mukati maawa makumi maviri nemana.
Nharembozha kiredhiti kadhi kugadzirisa kunopa mabhizinesi rusununguko rwekubuda kuseri kwekambani yekutengesa voenda kune vatengi vavo, kungave kuri padunhu rakanaka, mutambo wemugwagwa, rori yezvokudya kana kunyangwe imba yekuratidzira iri padhuze neyakajairwa yako Checkout. Iko kugona kwevatengesi kugamuchira makadhi echikwereti uye echikwereti, chero kwavanenge vari, kuri kushandura Main Street uye nenzira yekutenga kwevaAmerican.
Kubhadhara Gateway vs. Kubhadhara processor
Kubhadhara masuo uye mubhadharo processor ndiwo makiyi maviri akakosha muketani yekugadzirisa cheni. Saiye muridzi webhizinesi, iwe ungangodaro wakanzwa aya mazwi uye wakashamisika kuti mutsauko chii. Kune mapato mana anobatanidzwa neese kiredhiti kadhi kutengeserana:
Bhengi rinowana iro rinopa masevhisi ekugadzirisa masevhisi
Iyo kuburitsa bhangi iyo yakapa iyo mutengi kiredhiti kadhi kana kiredhiti kadhi
Basa revabhadhariri ekubhadhara uye masuo ekubhadhara anosiyana, asi chimwe nechimwe chinhu chakakosha pakubvuma kubhadhara online.
Chii chinonzi Payment processor? - Kugamuchira makadhi echikwereti kubhizinesi rako, vatengesi vanogadzira account nemutengesi webasa seBluePay. Iyo yekubhadhara processor inoita iyo transaction nekutumira data pakati pako iwe, mutengesi; kuburitsa bhengi (kureva, bhangi rakapa kiredhiti kadhi rako rechikwereti); uye kubhengi rinowana (kureva, bhangi rako). Iyo yekubhadhara processor zvakare inowanzo kupa makadhi echikwereti michina uye zvimwe zvishandiso zvaunoshandisa kugamuchira kiredhiti kadhi kubhadhara.
Chii chinonzi Payment Gateway? - Gedhi rekubhadhara rinopa mvumo yekubhadhara mae-commerce mawebhusaiti. Funga nezvayo seinternet poindi-yekutengesa terminal kune rako bhizinesi. Kana iwe ukasaina kusaina account yemutengesi, wako mupi anogona kana asingakwanise kupa yekubhadhara gedhi.
Kubhadhara processor kana Kubhadhara Gateway: Ndeipi Ini Yandinoda?
Iko kushandiswa kwakawanda kwegedhi chitoro checommerce pa internet. Kana usiri bhizinesi re-e-commerce, ungangodaro usade regedhi rekubhadhara. Akaunzi yekutengesa account inogona kuve yakanyanya kunaka. Tarisa account yemutengesi iyo ine inonzwisisika kubhadhara maitirwo, 24/7 vatengi, uye PCI-inoenderana (muyero wekuchengetedzwa kwekadhi rechikwereti) kugadzirisa.
Kune rimwe divi, iyo yekubhadhara yekugedhi ingangove mune rako ramangwana kana iwe uine kana uri kuronga e-commerce saiti. Havasi vese vatengesi veakaunzi yevatengesi vane gedhi rekubhadhara. Vamwe vatapi vanoshandisa yechitatu-bato yekubhadhara gedhi, iyo inogona kunetsa kana iwe uine kukakavara. Ndiani waunobata kana iwe uine dambudziko?
Gateway uye Maitiro Ekugadzirisa
Chimwe chikonzero nei masangano achimisa kuitiswa kweiyo kiredhiti kadhi yezvipo sisitimu nekuda kwemari inokanganisa. Zvinogona kuve zvakaoma kuti musoro wako utenderedze ese aya mafaji akasiyana uye uone kana ari iwo akakodzera kune rako rakasarudzika sangano. Iyi inotevera runyorwa inosanganisira yakajairika mhando dzemakadhi echikwereti.
Mari yevatengesi veakaundi - Mutengesi chero munhu kana kambani inogadzira kiredhiti kadhi kutengeserana. Saka nekudaro, account yekugadzirisa inowanzo kunzi seakaundi yemutengesi. Yese kubhadhara kunoitwa kuburikidza neiyi nhoroondo yemari.
Imwe-nguva fizi - Maakaundi mazhinji evatengesi anouya neimwe mhando yekutanga mari yekumisikidza. Mari iyi inogona kutumidzwa sekumisikidzwa kwegedhi kana mari yekunyorera. Mamwe makambani anodawo kubhadharwa kweiyo software kana zvimwe zvishandiso zvinoshandiswa pakugadzirisa kutengeserana. Uri kushandisa webhu-yakavakirwa system kana urikurendesa michina yako? Kana zvirizvo, unogona kuve nemubhadharo wemwedzi wega wega panzvimbo yemubhadharo wenguva imwe yehurongwa kana michina.
Mwedzi weakaunzi account - Anenge account yega yega yekutengesa inouya nemari yemwedzi wega wega. Mari iyi inogona kutumidzwa seakaundi, chirevo, kana marefiti emari. Kazhinji, zvemwedzi nemitero zviri mumatanho emadhora gumi kusvika pamakumi matatu emadhora. Pamusoro pemubhadharo wemwedzi nemwedzi, mamwe maakaundi anodawo mari yepasi pemwedzi.
Mari yekutengesa uye mutengo wekudzikisa - Chiitiko chega chega chinowanzo kuve nemaviri ekugadzirisa mitengo… an Mari yechinhu (kazhinji mari iyi iri mumatanho e $ 0.20 uye $ 0.50) uye a chikamu chekutengesa. Mari iyi inonzi se dhisikaundi rate. Mitengo yemutero inosiyana zvakanyanya kune akasiyana ma processor, kazhinji ari pakati pezvikamu zviviri kusvika zvina muzana. Rudzi rwekadhi rechikwereti uye nzira yekugadzirisa zvese zvinoita basa mune yakaderera mutengo. Ruzhinji rwemubhadharo wemari inoenda kukadhi rinoburitsa kadhi rechikwereti (kureva Visa, Tsvaga).
Iko kunetseka kwekuenzanisa makadhi uye masevhisi
Zvinogona kuve zvakaoma kwazvo, kana zvisingaite, kuenzanisa mari yemakambani akasiyana nekuti mazhinji acho haapi mari dzawo nenzira yakapusa. Ndiri kutanga kufunga kuti magedhi mazhinji nema processor anoita izvi nemaune!
Semuenzaniso, dzimwe nguva mitengo yemitero inodonhedzwa mukati meiyo mari yekuchinjana uye mubhadharo wesangano rinotarisira zviitiko zvakasiyana siyana. Zvimwe zvinhu zvinokanganisa mutero wekutengesa unosanganisira zvinotevera:
Rudzi rwekadhi rinoshandiswa (kureva kiredhiti kadhi vs. kadhi rekubhengi)
Iyo yekugadzirisa nzira yekutengesa (kureva kuti yakamisikidzwa mu vs. yakatsvairwa)
Bvunzo dzekudzivirira kubiridzira (kureva kuti ndiyo kero imwechete inoshandiswa kune ese kiredhiti kadhi yekubhadhara kero uye chaicho chiitiko?)
Ngozi inosanganisirwa yekutengeserana (kureva kuti makambani mazhinji anotenda kuti zviitiko zvakapedzwa pasina kadhi yemuviri zvine njodzi zvakanyanya)
BluePay chiri wese-mu-mumwe mupi, ivo vane yavo yekugedhi yekubhadhara iyo inowanikwa kune vatengesi account account. Iyo BluePay gedhi inogona kushandiswa munzvimbo yekutengesa ine swipe kuverenga. Bluepay inosanganisirwa mune akati wandei Pos masisitimu uye anogona kugadzirisa PIN debit transaction. Kushandisa gedhi rekubhadhara kuchengetedza zvakachengetedzeka kubhadhara kunogona kudzikamisa zvikanganiso, kumhanyisa kutengeserana, uye kurerutsa kuyananiswa.
Kana iwe usiri kuda kuisa mari kuma terminals, kana kana iwe usina ecommerce webhusaiti, unogona zvakare kushandisa BluePay gateway's Virtual Terminal kugadzirisa mashandiro chero bedzi iwe uine Internet kubatana.
CHERECHEDZA: Isu hatina kubhadharwa, uye hatina hukama neBluepay… ivo vaingove vakanaka zvakakwana kuti vape ruzivo rwese rwataida kuwana iyi blog post!
Tags: bluepaykadhi swipekadhikadhi rechikweretikiredhiti kadhi kugadzirisakadhi rechikweretikudzivirira kubiridziramobile checkoutmuripo wegedhi fizipcipci kuteereraMari yekugadzirisachaiyo chinouraya
25 Mobile Kushambadzira Matanho egore ra2014 iro Rinokosha
Jun 4, 2015 pa1: 08AM
Izvi zvinotsanangura zvese zvandaida kuziva. Chinyorwa chikuru!